မည်သည့် eReader ဝယ်ရန်၊ အခြေခံ Kindle တစ်ခုသို့မဟုတ် Kobo Touch 2? | eReaders အားလုံး
ယခုအပတ်တွင် Amazon မှ eReader အသစ်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးမော်ဒယ်ကိုသက်သာစေပြီးသုံးစွဲသူများစွာသည်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးပုံစံကိုမရယူလိုကြသော်လည်းမည်သည့်နေရာတွင်မဆို ebook များကိုဖတ်ရှုကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငွေအမြောက်အမြားပေးစရာမလိုဘဲ.
သို့သော် Basic Kindle သည်ဈေးကွက်တွင်တစ်ခုတည်းသော eReader မဟုတ်ပါ။ ၎င်း၏ပြိုင်ဘက် Kobo သည် Kobo Touch2ကိုစျေးကွက်တစ်ခုတည်းကပင်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ မည်သည့် eReader ကိုဝယ်ယူသနည်း။ Basic Kindle (သို့) Kobo Touch 2?
အမှန်တရားကတော့ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးမှာဟာ့ဒ်ဝဲဟာတူညီပေမယ့်၊ Kobo Touch2ကဒေါ်လာ ၁၀ ထက်ပိုပါတယ်လူများစွာသည် Basic Kindle ကိုရွေးချယ်ကြမည့်ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုရှိသော်လည်းဤ eReaders များတွင်သိရန်အချက်အလက်များပိုများသည်။
Kobo Touch2ကတော့ Kindle ထက်ပိုပြီးကုန်ကျပါတယ်
ကံမကောင်းတာကကျွန်ုပ်တို့မှာအမြင်အာရုံပြproblemsနာရှိရင် (သို့) ebooks တွေကိုနားထောင်ချင်ရင် Kindel Basic ဟာငါတို့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။ Kobo Touch2မှာသင် ebooks တွေကိုနားထောင်ဖို့ဘာမှမရှိဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည့် eReader တစ်ခုကိုလိုချင်ပါက Kobo Touch2သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ Basic Kindle ထက်ဘက်ထရီပိုများတယ်.
Hardware ပိုင်းအရ Basic Kindle ၏မျက်နှာပြင်သည် Kobo Touch2ထက်မျက်နှာပြင်ပိုကောင်းသည်။ အဆုံးတွင်စာလုံး၏ပြတ်သားမှုကိုချိန်ညှိနိုင်သည်၊
ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ပုံစံများသည် eReader တွင်အရေးကြီးသည်။ Kobo Touch2တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ eReader ကို Facebook နှင့် Pocket တို့နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ပြီးလူမှုရေးပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ Basic Kindle သည် Goodreads နှင့် Kindle Unlimited တို့ကိုပေးထားသည်, များစွာသောအဘို့အလွန်ဆွဲဆောင်မှုကမ်းလှမ်းမှုနှစ်ခု။ ပုံစံများနှင့်စပ်လျဉ်း။ အမေဇုံက၎င်း၏ကန့်သတ်မှုမူဝါဒကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် Kindle ပုံစံများကိုသာဖတ်ခွင့်ပြုသော်လည်း Kobo Touch2တွင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည်။ မည်သည့်ဆော့ဝဲလ်ကိုမျှမပါဘဲလုံးဝရုပ်ပြနှင့် ebooks များကိုလုံးဝဖတ်ရန်ဖြစ်သည်။
တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တကယ်စျေးနည်းနည်းနဲ့ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ အခြေခံ Kindle သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်ပါကကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောကြော်ငြာကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိသလိုမည်သည့်စာရွက်စာတမ်းမျှမဖတ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသောရွေးစရာမှာ Kobo Touch2ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းမြင့်မားမှုကိုမရွေးသရွေ့၊ ထို့နောက်အမှုအရာတွေအများကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။ မထင်ဘူးလား အကယ်၍ သင့်အမှုဖြစ်လျှင်မော်ဒယ်များစွာပါ ၀ င်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုဤနေရာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည် အကောင်းဆုံး e-book.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » ဘယ် Kindle ဒါမှမဟုတ် Kobo Touch2ကို ၀ ယ်မလဲ။
JRR Tolkien ၏ 'Earth of Rings of the Map' မြေကြီးပေါ်ရှိမြေပုံကိုပြသခဲ့သည်